Ngaba kungakho isondo ukuba akukho ukungena? | IBezzia
Ngaba kungakho isondo ukuba akukho ukungena?
UMaria Jose Roldan | 08/04/2021 04:59 | Isini
Kude kube namhla, inkolelo edumileyo isekhona ukuba akukho kungena, akukho sini. Kubalulekile ukubeka ecaleni ezo zimvo kwaye ucinge ukuba kukho isondo xa kukho ukuphululwa, ukuphulula amalungu esini okanye isondo ngomlomo phakathi kwabantu bobabini.
Kuya kufuneka ubenengqondo evulekileyo ngakumbi kwaye ulibale malunga nenyani yokuba kukho isini kuphela ukuba indoda iyakwazi ukugqobhoza umfazi ngexesha lokwabelana ngesondo. Kwinqaku elilandelayo sikunika izitshixo zokuqinisekisa ukuba kunokwabelana ngesondo nangona kungekho kungena.
1 Kunokubakho isondo ukuba akukho kungena
2 Ubunzima besini
3 Ukufundiswa kwakhona ngesondo
Kunokubakho isondo ukuba akukho kungena
Ngethamsanqa baninzi ngakumbi abantu abazi ukuba bacinga ukuba kunokubakho isondo nangona ukungena komntu kungenzeki. Le ndlela yokucinga ivela kakhulu kwabasetyhini kunamadoda. Umntu unokonwabela ubomi besondo obusebenzayo nangona kungekho naluphi na uhlobo lokungena.
Imfundo ehlwempuzekileyo yezesondo efunyenwe yenza inani elikhulu labantu, ukungena kwelungu lobudoda kwilungu lobufazi kuvakala ngathi yinto enyanzelisiweyo ukuthathwa njengesondo. Le mfundo inika ukhetho olukhulu kulonwabo lwendoda kunolo lwabasetyhini, ke inokuthi ithathelwe ingqalelo njengoyindoda.
Inyani yokuba isondo sincitshisiwe ukungena ekungeneni inento yokwenza nolona luvo lukhulu lokuba abantu bafanele ukuba babe nesini esahlukileyo. Kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba isini sinzima kakhulu kwaye kunokubakho ngokupheleleyo kunye nokwanelisa iinkqubo zesondo ngaphandle kokungena okanye i-orgasm. Isenzo sesondo akufuneki sincitshiswe kwinto yokufaka incanca kwilungu lobufazi.
Isitshixo kuko konke oku kufuneka sifunwe ngokwembono yabasetyhini. Zininzi izifundo ezibonisa ukuba abasetyhini bakhetha iindlela zesondo ngaphandle kokungena. Kunqabile ukuba owasetyhini angonwaba ngesondo ukuba ungenwe yindoda kuphela. Bafuna olunye uthotho lweendlela ukuze bakwazi ukonwaba kwaye bonwabele ngexesha lesenzo sesondo.
Ukufundiswa kwakhona ngesondo
Ngenxa yoku, kubalulekile ukuba ukwazi ukuphinda ufundise kwicandelo lezesondo kwabasetyhini kunye nabesilisa. Abantu kufuneka babenolwazi ngawo onke amaxesha amandla amakhulu ezesondo anabantu. Ukwabelana ngesondo ayikokungena nje kwaye zininzi iindlela zokuzonwabisa ebhedini ngaphandle kokungena. Kude kube oko kufundiswa kwakhona kwenzeke, abantu abaninzi baya kuqhubeka nokucinga ukuba isini senzeka kuphela xa kukho ukungena. Kukwabaluleke kakhulu ukuba nonxibelelwano oluhle kunye nesibini ukuze sikwazi ukuthetha izinto ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokufihla nokwazi ukuba bobabini abantu bonwabela ngakumbi ebhedini.
Ngamafutshane, kucacile ukuba kukho isondo, ukungena komntu akuyomfuneko. Ukwabelana ngesondo kubanzi kwaye zininzi iindlela zokuzonwabisa ebhedini kunye neqabane lakho, nangona kungekho kungena.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Psychology kunye nesibini » Isini » Ngaba kungakho isondo ukuba akukho ukungena?
Iincwadi ezi-5 zobufazi ezipapashwe kunyaka ophelileyo
Ngaba ukutya okune-detox kuyasebenza ngokwenene?